Thwebula VirtualDub 1.10.4 isizulu – Vessoft
Isiqophi converters, Screen bamba
VirtualDub – a software for screen bamba nokulungisa video files. Isofthiwe ikuvumela ukulungisa ukugqama kanye nalokho video, shintsha noma susa amathrekhi umsindo, ukuguqula video kwezinye izakhiwo, ushintshe usayizi amafayela video njll VirtualDub iqukethe amathuluzi ukusika ingxenye ezikhethwe video, ukuhlela ividiyo bese ukunameka ngalo imiphumela ehlukile. Isofthiwe ikuvumela ukuba bandise ukusebenza batch-processing amafayela ngokusebenzisa ukuxhumana filters video bakwamanye abakhiqizi. VirtualDub ibusa ubuncane system imithombo futhi ine lula ukusebenzisa interface.
Ithumba video kusukela screen
Ihlela amafayela alalelwayo video
A set of imiphumela ehlukile
Connection of ezengeziwe video ehlunga
Amazwana on VirtualDub:
VirtualDub Ahlobene software: